21 novembre 2020 – Madatopinfo
Misoko mangina ny vidim-piainana. Samy mahatsapa ny isan-tokantrano fa vao volana Novambra, efa mihopampana ny vidin’ny vary. Ny sakafo sy ny kojakoja andavanandro efa tsy lazaina intsony. Ny olompirenena anefa
Manomboka ny fanatanterahana ny tetikasa Miami, izay hanova endrika tanteraka ny morondranomasin’i Toamasina ka hanintona sy hampiroborobo ny fizahantany ary hampiakatra ny toe-karena. Ho vita ihany koa ny Boulevard Ratsimilaho,